RainbowKey | အရောင် Keyboard ကို APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » RainbowKey | အရောင် Keyboard ကို
RainbowKey | အရောင် Keyboard ကို APK ကို
RainbowKey အရောင်ကီးဘုတ် - ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာကီးဘုတ် themes များနှင့်အတူ Android အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်, Fancy emojis & ဖောင့်, Flash ကိုပွတ်ဆွဲ, အော်တိုပြင် input ကိုနှင့်စကားလုံးဟောကိန်းများ။~ သင့်ရဲ့ chatting ဖန်စီမှအခမဲ့ RainbowKey အရောင်ကီးဘုတ် Download နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများအကြားထွက်မတ်တပ်ရပ်
? အဆိုပါ RainbowKey အီမိုဂျီကီးဘုတ်အားလုံးနီးပါး apps များ, မက်ဆေ့ခ်ျတူ, Facebook Messenger, Twitter WhatsApp ကို, Instagram ကို, လိုင်း, WeChat အတွက်အသုံးပြုရနိုင်ပေမယ့် ...
? ထိုအ 60 + ဘာသာစကားများထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ? ။ ။ ။ ။ ? ။ ။ ။ ။
RainbowKey ၏ Awesome ကိုအင်္ဂါရပ်များ:
RainbowKey သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကီးဘုတ်ဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ရုံပြခန်းမှသင်၏ဓါတ်ပုံကို upload တင်နှင့်ခလုတ်များနှင့်စာလုံးများ၏သင်အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဖို့အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်၏လက်ကနေထူးခြားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ပြု !!!
? တင့်တယ် Themes
RainbowKey build-in ကိုဆောင်ပုဒ် store မှာကိုပူဇျောအထူးဒီဇိုင်းတိုးတက်အောင်နံပါတ်များကိုရှိပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်ဒီဇိုင်းများအားလုံးနီးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးစွဲသူများကကြိုဆိုကြသည်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာဖွငျ့ကြသည်! နှင့်ပိုပြီးနှင့်ရောင်စုံနောက်ခံ, စိတ်ကြိုက် key ကိုပုံစံမျိုးစုံ, ဖောင့်တွေနဲ့ပိုပြီးလှပ themes များ, အရောင်နှင့်ပင်စိတ်ကြိုက်စာရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သံကိုမကြာမီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
? နောက်ဆုံးရအသစ်ကရုပ်ပြောင်များနှင့် GIF များ
ရုံမျှမကိစ္စ, သင်သည်ပျော်ရွှင်ပျင်းစရာသို့မဟုတ်အံ့အားသင့်ခံစားရသည်ဤကြောက်မက်ဘွယ်အသစ်သောရုပ်ပြောင်နှင့် GIF များနှင့်အတူကြိုးစားကြ! ခွေးကလေး, ကာတွန်းကိန်းဂဏန်းများ, လှပသောမိန်းကလေးများ, သင်အတိအကျသင့်ရဲ့ gif ကီးဘုတ်ကနေတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ခံစားခကျြနဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ဘာမှ!
? စတိုင် Fonts
သင်၏စကားအလှဆင်ဖို့အေးမြဖောင့်များစွာ။ သင်အကြိုက်ဆုံးဖောင်နှင့် wow သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ type!
သင် button ကို click နှိပ်တဲ့အခါ, သက်တံ့ရောင် key ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရယ်စရာစကားသံကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျကိုမယုံ, သင်ပင်ပန်းတိုင်အောင်ကစားရန်ရပ်တန့်မပေးနိုငျသညျ!
သငျသညျစာရိုက်နေတာဘယ်အရာကိုအာရုံခံကြောင်းအသိဉာဏ်ရုပ်ပြောင်ခန့်မှန်း။ အီမိုဂျီအီမိုတီကွန်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, အပြုံးမျက်နှာနဲ့ရုပ်ပြောင်ပန်းချီဦးတည်းအမြန်အမျိုးအစားအားလုံးကိုများမှာ!
? Input / လက်ဟန် Input အားပွတ်ဆွဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွတ်ဆွဲ input ကိုနည်းပညာနှင့်အတူ, သင်တစ်ဦးလက်ညှိုးထိုးဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲတယောက်ကိုတယောက်စာတစ်စောင်ကနေလျှောခြင်းဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်ရိုက်ထည့်နိုငျပါသညျ!
? အော်တိုပြင် & နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘီဘာအို
အင်္ဂလိပ် (အမေရိကန် / အင်္ဂလန်နိုင်ငံ)
ပြင်သစ် (FR /, CA)
ပေါ်တူဂီ (PT / BR)
စပိန် (SP, အမေရိကန်, LATAM)
ကျနော်တို့မဆိုသွင်းအားစုကနေသင့်ရဲ့ဒေတာသိုလှောင်သို့မဟုတ် share ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
? ထွက်-ဖက်ရှင်ကီးဘုတ်ပျင်းစရာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get ။ RainbowKey Android အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့စူပါဖန်စီရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ built-in သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုစာရိုက်နေစဉ်တွင်လွယ်ကူအီမိုဂျီ GIF များနှင့်စတစ်ကာများနှင့်တူသောအရာတို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့လုပ်ဖို့တခြားရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်။ ပို. အရေးကြီးသည် ... သင် RainbowKey အတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကီးဘုတ်ဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကိုအသုံးပွုနိုငျ!
? သငျသညျကအားလုံးကိုမထားတဲ့ All-In-One ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် RainbowKey စဉ်းစားရန်ကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။
RainbowKey အခမဲ့ Download နှင့် သင့်ရဲ့ chatting ရောင်စုံချက်ချင်းလုပ်!?
- နယူးစတိုင် & ခေတ်မှီ themes များကသင်၏ကီးဘုတ်အမြဲထွက်မတ်တပ်ရပ်ကြကုန်အံ့မှမှန်မှန်ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်။
RainbowKey | အရောင် Keyboard ကို
13.97 ကို MB